Sakafo isan-kerinandro miaraka amin'ny Thermomix - Omano ny lovia isan'andro | ThermoRecipes
Ny fanampiana rehetra dia raisina ary indrindra fa raha ny fanamorana ny asa ao an-dakozia, amin'ny fanomanana ireo hanina isan'andro. Amin'ity habaka ity dia afaka mankafy ny menio isan-kerinandro, izay hankafizanao ny hevitra tsara indrindra momba ny fanomanana resipeo isan-kerinandro. Fomba tena miavaka amin'ny fandaminana ny fiainana ao an-dakozia nefa tsy manahirana kokoa ny fiainana. fomba fanamboarana isaky ny herinandro, miaraka amin'ny fangaro, torohevitra ary fanomananaAmin'izany no hanatsarana ny asantsika any an-dakozia. Ka raha ny zavatra tadiavinao dia hevitra ho an'ny menus isan-kerinandro dia tafiditra ao anaty enclave tonga lafatra ianao.
Efa vonona ny sakafo ho an'ny herinandro faha 26 taona 2022. Tonga miaraka amin'ny recette be dia be mba tsy ho lany hevitra hanomanana ny sakafo atoandro sy sakafo hariva ny 27 jona ka hatramin’ny 3 jolay.
Saika tsy tonga saina isika dia miditra amin'ny Jolay, volana mafana par excellence ary izay ny fety, indrindra ho an'ny ankizy madinika ao an-trano.
Noho izany dia tsy misy safidy afa-tsy ny vovoka amin'ny fomba fanamboarana vaovao, maivana ary mora indrindra ao amin'ny bokin'ny fomba fahandro.
Ny miavaka indrindra
Mitambatra foana ny sakafonay vondrona sakafo rehetra na dia efa nampifanaraka azy ireo izahay mba ho afaka hanomana sakafo mangatsiaka.
Efa nampifanaraka ny legioma, fa manana azy ireo izahay ampifandraisina amin'ny sakafo mahery kokoa toy ny lasopy, ary nanova azy ireo ho sakafo maivana, hummus ary salady ... ahoana ny hevitrao?
Ny alarobia, alakamisy ary zoma dia misy lovia tokana. Hevitra izy ireo satria ao anatin'ny recipe tokana dia manana proteinina, gliosida ary tavy ianao. Miankina amin'ny lalàm-panorenanao dia mety tsy ho ampy ho anao izany.Raha eny dia azonao ampiarahina amin'ny tsakitsaky mahasalama toy ny pâtés, fa tandremo ... aza mihoa-pefy ny mofo.
Paté haingana 9 ao amin'ny Thermomix
%%excerpt%%9 pâtés tsara tarehy azonao atao ao an-trano sy miaraka amin'ny Thermomix ao anatin'ny minitra vitsy monja. Hahagaga ny vahiny ianao.
Talata ho an'ny sakafo hariva dia manana a burgers matsiro miaraka amin'ny salmon izay azonao soloina amin'ny iray amin'ity fanangonana ity.
Fomba fanamboarana burger 9 milelaka rantsantanana
Ny alakamisy dia hanomana ny sasany atody fenoina izay tena mora sy manankarena. Manoro hevitra ny dikan-teny misy anchovies izahay fa azonao atao ny manandrana ny iray amin'ireto fomba ireto:
Resina atody 9 devoly hankafy ny fahavaratra
Amin'ity fanangonana resina atody atody 9 ity dia hahita hevitra mora ianao hankafizanao ny fahavaratra sy hahazoanao tombony betsaka indrindra amin'ny Thermomix anao.
Menu herinandro 26 amin'ny 2022
Gazpacho misy serizy
Fampivoarana voankazo iray an'ny gazpacho mahazatra. Salama, miaraka amin'ny loko mena mahery sy lovia mamelombelona, ​​mety indrindra hamonoana ny hafanan'ny fahavaratra.
Atody voadona miaraka amin'ny zucchini sy tuna
Ity zucchini sy tuna scramble ity dia tsotra tahaka ny ranony. Fomba fahandro tsotra izay ho vonona ao anatin'ny 15 minitra miaraka amin'ny Thermomix anao.
Salady voatabia misy chives sy basil-oregano vinaigrette
Salady voatabia mamelombelona miaraka amin'ny saosy basil sy oregano vinaigrette. Mety miaraka amin'ny lovia hena na trondro faharoa.
Hummus tongolo vita amin'ny caramel
Hummus tongolo caramelized dia matsiro fotsiny. Mora izany, matsiro ary tonga lafatra miaraka amin'ny legioma na toast.
Mofo tsy misy masirasira
Indraindray dia mora kokoa ny manamboatra mofo ao an-trano toy izay mivoaka mividy azy. Ny masinina anio dia tsy manana masirasira ary ao anatin'ny adiny roa dia hataontsika vonona izany.
Salady dipoavatra natsatsika
Ny salady dipoavatra natsatsika dia firavaka amin'ny gastronomie antsika mifototra amin'ny dipoavatra mena, tongolo gasy ary atody nandrahoina.
Couscous miaraka amin'ny legioma sy sipa
Ny couscous miaraka amin'ny legioma sy sifotra dia fomba fahandro tena feno izay azo aseho amin'ny fomba samy hafa fa miaraka amin'ny vokatra matsiro mitovy hatrany.
Krema mangatsiaka an'ny asparagus sy akoho
Miaraka amin'ity crème asparagus sy kitrotro mangatsiaka ity dia hankafizinao, mandritra ny minitra roa, dingana voalohany matsiro, tsotra ary tena tany am-boalohany.
Burmona salmon misy saosy mangahazo
Originaes vaovao burger salmon miaraka amina mangaha mamy sy marikivy izay hahafinaritra anao eo amin'ireo namanao
Salady tsaramaso vaovao sy cod
Ny salady tsaramaso vaovao sy cod dia mety amin'ny fahavaratra. Salama, salama, mora ary vonona ao anatin'ny 10 minitra. Lavorary entina mankany amoron-dranomasina!
Karazam-boasary sy karaoty
Ny pudingan'ny karaoty sy cauliflower dia safidy mahasolo sy voalohany ahafahan'ny ankizy mihinana tsara satria ankoatry ny legioma dia misy ronono sy atody.
Tostas misy escalope akoho voadio
Fomba fahandro tonga lafatra amin'ny sakafo hariva tsy tapaka miaraka amin'ny namana. Avelao izy ireo hanampy anao amin'ny fanangonana ireto toast schnitzel voanjo voahosotra ireto. Hahafinaritra anao rehetra !!
Salată de boeuf, salady Rosiana avy any Romania
Salată de boeuf, salady Rosiana fomba romanianina, dikan-teny tena matsiro sy matsiro miaraka amin'ny henan'omby.
Papillote legioma sy saosy 5
Papillote legioma mahasalama sy mahasalama matsiro miaraka amin'ny saosy 5 izay hahatonga azy matsiro
Atody nofonoina tuna sy teris
Mpanafika na mpanamora sakafo mora atao. Ireto atody fenoina ireto dia misy «tuna», «anchovie», mayonnaise ary ny ahitra manitra ankafizinay indrindra.
Amin'ity salady paty ity dia afaka mankafy ny maraina eny amoron-dranomasina ianao amin'ny fahafantarana fa ho vonona ny sakafonao rehefa mody ianao.
Fonosina epinara, ham ary ricotta ny Piadina
Ary ho an'ny androany piadinas tsotra sy matsiro, fa amin'ity indray mitoraka ity dia miendrika fonosana feno episy, ham ary ...
Sakafo sakafom-borona nendasina
Amin'ity tsakitsaky tantely mahasalama sy namboarina ity dia ho mora kokoa aminao ny mihinana sakafo isan-karazany nefa tsy mila miala tsakitsaky.
Pate legioma vita amin'ny zucchini natsatsika, paty tahini ary ranom-boasarimakirana. Azo aroso amin'ny triangles katsaka na legioma crudité.
Vary mainty mamy misy satroka sy saka
Vary mainty mahafinaritra miaraka amin'ny cuttlefish sy makamba, miaraka amina endrika tantely izay ampianarinay anao hahandro amin'ity fomba fahandro natao ho an'ny Thermomix ity. Te ho gaga ve ianao?
Fandroahana voatabia voajanahary
Saosy hiaraka amin'ny chips na nachos, vita amin'ny voatabia voajanahary. Sakafom-pisakafoanana haingana hiomanana amin'ny Thermomix anay.
Cutlets fenoina paoma sy fromazy manga
Sombin-kisoa matsiro nopetahana paty paoma sy fromazy manga, feno tsiro. Haingana sy mora ny manomana. Mety amin'ny dingana faharoa.
Cocktail an-tsaha sy pear
Atorinay anao ny fomba fanaovana cocktail an-kalamanjana, foza ary poara, miaraka amina saosy cocktail matsiro miaraka amin'ity fomba fahandro mora ity ho an'ny Thermomix.
Fideuá misy aubergine sy fromazy osy
Fideuá hafa, vita amin'ny aubergine sy fromazy osy. Mety ny miala efa voaomana mialoha na mitondra kitapo.
Ratatouille dia lovia vegano izay avy any Frantsa. Izy io dia azo ampiasaina ho haingo-kaingo na irery, miaraka amin'ny mofo.
Amin'ireto mofo ireto dia azonao atao ny manamboatra sandwich mini. Namboarina tamin'ny masirasira izy ireo, nefa azo natao tamin'ny masirasin'ny mpanao mofo ihany.
Resipeo 10 maivana miaraka amin'ny 150 kcal
ny Mayra Fernandez Joglar hace Ora 7 .
Inty ny compilation nandrasan'ialahy... Recipe maivana 10 misy kcal latsaky ny 150 ka afaka mankafy...
ny Mayra Fernandez Joglar hace 1 andro .
Efa vonona ny sakafo ho an'ny herinandro faha-26 amin'ny 2022. Tonga miaraka amin'ny fomba fanamboarana maro izy io ka…
Menu herinandro 25 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace 1 herinandro .
Mandalo amin'ny hafainganam-pandeha tanteraka ny volana jona, koa andao hararaotin'ny sakafo amin'ity herinandro faha-25 ity...
Menu herinandro 24 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace Herinandro 2 .
Menu maivana ny herinandro faha-24 amin'ity taona 2022 ity ka, manomboka ny 13 ka hatramin'ny 19 jona, dia mikarakara ny tena...
Menu herinandro 23 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace Herinandro 3 .
Ny herinandro 23 amin'ny taona 2022 dia efa vonona ny hankafizinao, ny 6 ka hatramin'ny 12 jona, miaraka amin'ny fomba fanamboarana...
Menu herinandro 22 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace Herinandro 4 .
Ny sakafo ho an'ny herinandro 22 amin'ny 2022 dia feno hevitra vaovao hanaovana veloma ny volana Mey ary tongasoa…
Menu herinandro 21 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace 1 volana .
Tsy misy hevitra momba ny sakafo atoandro sy sakafo hariva amin'ny herinandro manaraka? Jereo ny sakafontsika herinandro faha-21 amin'ny…
Menu herinandro 20 amin'ny 2022
Tonga eto ny sakafon'ny herinandro faha-20 amin'ny taona 2022. Tolo-kevitra feno hevitra mora ho an'ny sakafo atoandro sy sakafo hariva...
Menu herinandro 19 amin'ny 2022
ny Mayra Fernandez Joglar hace 2 volana .
Ny sakafo ho an'ny herinandro faha-19 dia feno soso-kevitra mba tsy ho lany hevitra ary afaka manomana ny...
Saosy bechamel 10 tsotra sy matsiro
Ho tianao ny soso-kevitray anio. Izy io dia fanangonana misy saosy bechamel 10 tsotra sy matsiro…
Menu herinandro 18 amin'ny 2022
Ny sakafo ho an'ny herinandro faha-18 dia vonona miaraka amin'ny sakafo atoandro sy ny sakafo hariva ho an'ny andro 2 ka hatramin'ny…
Puree legioma nentim-paharazana
Puree Triple ho an'ny zazakely
Voanjo miaraka amin'ny legioma